Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama? Oromia Shall be Free |
bilisummaa July 2, 2015	Comments Off on Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama?
Tags afaan oromoo barruu kitaaba Kitaaboota
Previous Baatiin Ramadaana Baatii Qur’aanaa ti. Waa’ee Qur’aana wantoota armaan gadii kanneen baraa ykn immoo yaadadhaa!
Next Biyya alaa keessa ta’anii seenaa ofii odeessuun qabsoo Oromoo tiif bu’aa malii qabaa …?